Obianọ Abàgide n'Itute Amụma Ịgba Mmiri n'Ubi
Gọvanọ Obianọ kwuru nke a oge ọ gara ileta ebe ahụ e nwere nnukwu igwè e ji agba mmiri n'ubi, bụ nke dị n'Ifite Ọgwarị n'okpuru ọchịchị Ayamelụm dị na steeti ahụ.
Ka ọ gachara okirikiri, ma lechaa ka ọnọdụ siri gbata kwụrụ n'ebe ahụ, ọ kwuputara ezi mmasị o nwere na njikere ọchịchị ya dị n'itute ebe ahụ ka ọ rụbakwa ọrụ nke ọma, ma
kwuo na nke ahụ ga-enyezị aka ịhụ na a na-akọpụta osikapa gbaa nyụụ nakwa site n'ahọ ruo n'ahọ n'okpuru ọchịchị ahụ.
Igwè mmiri ahụ bụ nke a rụchara n'ahọ 1987, ma bụrụkwa nke bịara site n'aka onyeisi ala Ibrahim Babangida n'oge ọchịchị ndị agha, ebe otu ụlọ ọrụ mba Japan bụ ndị na-elekọtabụ ya anya oge ahụ, wee rukwaa mgbe a gbahapụrụ ya kemgbe ihe dịka ahọ iri na asaa gara aga n'ihu ọgba aghara dapụtara.
N'otu aka ahụ, gọvanọ Obianọ kwuputakwara afọ ojuju ya na obi ụtọ ya banyere otu agba nke mbụ nke amụma "Agricultural Transformation Agenda Support Program" (ATASP) siri nwee mmasị n'ọrụ ngo ahụ, ma kwuo na ha na ndị steeti ahụ ga-ezùte na mgbe adịghị anya iji wee kpaa ụbụbọ maka nke ahụ.
Na ntụnye nke ya, onye nhazi amụmà "Lower Anambra Irrigation Project" bụ maazị Eric Ejeagbụcha kwuru na igwè ahụ nwere ikike ịfụsà mmiri wee ruo ihe dịka Kilomita iri na isii, ma kesàá mmiri n'obosara ala ruru hekta puku atọ na narị asatọ.
Onye nchịkọta "Agricultural Transformation Agenda Support Program" (ATASP) na mpaghara ahụ, bụ maazị Romanus Egba n'aka nke ya, kwuru na ha arụnyela igwè nkesà mmiri dị iche iche na mpaghara ahụ iji nye ebe nkọpụta osikapa dị n'Ọmọr, ma kwuo na ha ga-arụnyekwu ọtụtụ ma ọ bụrụ na e binye aka n'amụmà ego ọrụ ala anyị nke ahọ 2018.
N'ozi ekele ya, onyeisi oche nchere oge n'okpuru ọchchị ahụ, bụ maazị Ken Okolo toro gọvanọ Obianọ maka ezi nzọpụ ụkwụ ahụ, ma kpọkuokwa onye ọbụla ka ọ dọnyere gọọmenti steeti ahụ ukwù n'ihi mbọ pụrụ iche ọ na-agba n'iji debe steeti ahụ n'ogoogo mba ụwa.